သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ် အိမ်သာအတွင်းမှ သေဆုံးမှူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ် အိမ်သာအတွင်းမှ သေဆုံးမှူ
သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ် အိမ်သာအတွင်းမှ သေဆုံးမှူ
Posted by etone on Jan 19, 2011 in My Dear Diary |9comments
ဒီနေ့မနက် အင်တာနက်ထဲမှာ မွေနောက်ဖတ်ရင်းသတင်းတပုဒ်ဖတ်တွေ့တော့ ဖတ်ရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည် ။ ဒီသတင်းလေးကတော့ မကြာသေးမီ အချိန်ကမှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ သိရိမင်္ဂဈေးသစ်ကြီးရဲ့ အိမ်သာထဲမှာ အမျိုးသားတစ်ဦး လည်ပတ်ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာနှင့် သေဆုံးနေခြင်းဖြစ်ပါည်။ ၄င်းသေဆုံးမှူမှာ ဈေးသစ်ဖွင့်ပြီး လေးရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာ ၃၀ရက်နေ့ မနက် ဝေလီဝေလင်း အချိန်တွင်ဖြစ်သည် ။ ထိုအမျိုးသားသည် မုန်လာဥနီထမ်းသော အလုပ်ကြမ်းသမားဖြစ်ပြီး ချောင်းဆိုးသွေးပါဝေဒနာခံစားနေရာမှ ရောဂါလည်းပြင်းထန်ချိန်၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သလို ၊ အလုပ်မလုပ်ပဲ ဆေးကုခံချိန်လည်း မရှိသဖြင့် ဘ၀ကို အရှုံးပေးကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နီးစပ်ရာ အပေါင်းအသင်းများမှ ယူဆကြသည် ။ ထိုသူသည် မသေဆုံးမီ အချိန်ပိုင်းကပင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို မိမိသည် ချောင်း ဆိုး သွေးပါရောဂါဖြင့် သေဆုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထိုမှ မသေဆုံးလျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီး မုန်လာဥနီလှီးသော ဓါးကို ကိုင်ကာ အများသုံး အိမ်သာထဲသို့ဝင်သွားကြောင်း သိရသည် ။ ဈေးသစ်ဟု ဆိုသော်ငြား အများသုံးအိမ်သာ ခြောက်လုံးထဲသာ ရှိသဖြင့် အိမ်သာဝင်သူများ တန်းစီနေကြရာ အိမ်သာတစ်ခုအတွင်းမှာ တစ်နာရီခွဲကျော်ကြာအောင် ထွက်လာခြင်းမရှိသဖြင့် တံခါးထုရိုက် သတိပေးခဲ့သည် ။ သို့သော် ထူခြားမှူမရှိသောကြောင့် အိမ်သာပေါ်သို့ ကျော်၍ တက်ကြည့်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ယောက် သွေးအိုင်ထဲတွင် လဲကျနေကြောင်းသိရပြီး ကယ်ဆယ်နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း သွေးထွက်လွန်သော ဒဏ်ရာကြောင့် ၄င်းအမျိုးသား သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဖတ်ခဲ့ရသည် ။ ထို အဖြစ်ပျက်ကို သုံး သပ်မည် ဆိုပါလျှင် ရောဂါဝေဒနာ ခံစားရပြီး ၊ ဆေးကုသခံနိုင်စွမ်းမရှိသဖြင့် အဖက်ဖက်မှ ဘ၀ကို အရှုံးပေးကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့သော အမျိုးသားဧ။် စိတ်ဓါတ်သည် မသေဆုံးမီကတည်းကပင် ဘ၀အမောတွေရုန်းကန်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျသွားခဲ့ကြောင်း ၊ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည် ။ ဘ၀ပေး အခြေအနေအရ အတတ်ပညာ သင်ကြားနိုင်မှူမရှိသော်လည်း ကာယကိုအားကိုးကာ တတ်စွမ်းသ၍ ကြိုးစားရပ်တည်ပါသော်လည်း ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသကဲ့သို့ ၀မ်းရေးတောင် အနိုင်နိုင် ရုန်းကန်နေရသော ဘ၀၊ အလုပ်လုပ်နေပါလျှက် မလောက်မငှငတ်တလှည့် ပြတ်တလှည့် ဖြစ်နေရသော ဘ၀ဖြင့် ဖြတ်သန်းနေရသူ ဘယ်နှစ်ဦးမျှ ရှိမည်မသိ ၊ ထိုကဲ့သို့ သေသွားလျှင် ပူပင်စရာမလိုဟု ခံယူထားသူများမည်မျှရှိမည်နည်း ….. ။ ဦးလေး၊ အဒေါ်တို့ ခေတ်ကပြောသော ငွေတစ်မတ်နှင့် မုန့်ဟင်းခါးစားလို့ရသည် တစ်နေ့လုံးနေမှ ငွေ တစ်ကျပ်တောင်မကုန်ဟူသော စကားများသည်ပင် ရယ်စရာကောင်းနေပေတော့သည် ။
သူ့ခမျာ ရောဂါဖိစီးလို့ စိတ်ညစ်နေတုန်း နေရာသစ်ပြောင်းရလို့ ပိုပြီး အဆင်မပြေနဲ့ စိတ်ကုန်သွားပုံရပါတယ်။ လူမှုဒုက္ခတွေ ဘယ်တော့များမှ နည်းပါလိမ့်မလဲ တို့ရွှေပြည်ကြီးရယ်။ ထိုင်ဝမ်မှာ စကာင်္ပူမှာ မလေးမှာ သူတို့နိုင်ငံသားထဲ ဆင်းရဲသားတစ်ယောက်မှ မရှိတော့ဘူးတဲ့။
ထိုင်ဝမ်မှာ စကာင်္ပူမှာ မလေးမှာ သူတို့နိုင်ငံသားထဲ ဆင်းရဲသားတစ်ယောက်မှ မရှိတော့ဘူးတဲ့။
သူ တို့ ထက် ပို ဆင်းရဲ တဲ့ ရွှေ တွေ ရောက် နေ တာ ကိုး
ငတ်တလှည့်ပြတ်တလှည့်ဒဏ်ခံရတော့လည်း နောက်ဆုံးမခံစားနိုင်တော့လို့ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာတွေဘာညာ မသိတော့တာဖြစ်မယ်…။
ကာယအားကိုးပြီးစားနေရတဲ့ဘ၀မှာ ဆေးကုနိုင်ဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေးပေါ့။
အခုခေတ်ကလည်း ရိုးရိုးဆေးခန်းသွားတောင် အနည်းဆုံး ၁၅၀၀ နဲ့ ၃၀၀၀ ကြားဆိုတော့လည်း၊
စားဖို့တောင် အနိုင်နိုင်ဘ၀မှာ သေဖို့လမ်းတစ်ခုပဲရှိတော့မှာပေါ့။
အခုဆို အချို့ဆေးခန်းကြီးတွေမှာ ဆေးရုံတက်ဖို့လာရင် ၊
တက်မဲ့ရောဂါအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မရှိရင် ဆေးရုံပေးမတက်ဘူးလို့သိရပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ ပိုက်ဆံမရှိရင် ရောဂါမဖြစ်မှပါပဲ.ဖြစ်ရင်တော့ လမ်းကတစ်လမ်းပဲ။
သူ့အတွက်က နေဖို့ထက် သေဖို့လမ်းကို ပိုရွေးတာ မှန်တယ်လို့တွေးမိတာဖြစ်မယ် . ဒီရွှေနိုင်ငံကြီးမှာက အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် ရောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင် ရွေးစရာလမ်းက သိပ်မရှိဘူးလေ ပြည့်သူဆေးရုံ ဆိုတဲ့ ဆေးရုံတွေမှာတောင် ပိုက်ဆံပေးမှ ရောဂါကိုကုပေးကြတာဆိုတော့ တစ်ခြားဆေးရုံတွေဆိုတာကတော့ တွေးတောင်မကြည့်နိုင်ပါဘူး …
သနားစရာပဲဗျာ …. နောက်ထပ်လည်း ဒီလိုသတင်းတွေထပ်ပြီးတော့ ကြားရလိမ့်ဦးမယ်ထင်တယ်ဗျာ …. ကူညီပါရစေ လို့ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတွေလည်း တကယ်တမ်းတော့ မကူညီကြပါဘူး …. ဆရာဝန်တွေကလည်း ဘာကျင့်ဝတ်မှ မလိုက်နာကြတော့ပါဘူး ….. ငွေမျက်နှာ တစ်ခုထဲကိုပဲကြည့်နေကြတယ် …… လောဘတွေဖုံးလွှမ်းနေကြတယ် …..
သနားပါတယ်နော်……… ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ဆေးဝါး ကုသပေးချင်လိုက်တာ….
တနေ့ပိစိကွေး ပိုက်ဆံချမ်းသာရင် မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပဲ အလှုလုပ်မယ်……….. ထီပေါက်ရင်တော့ လုပ်ဖြစ်မယ်…………….
သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေတာမဟုတ်ပဲ ရောဂါပြင်းထန်ပြီး ဆုံးသွားတယ်လို့ ထင်မိတာပဲ။